नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेता बाबुराम भट्टराईलाई एमाओवादीकै कार्यर्ताले गोली हान्ने धम्की दिए !
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेता बाबुराम भट्टराईलाई एमाओवादीकै कार्यर्ताले गोली हान्ने धम्की दिए !
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेता बाबुराम भट्टराईलाई एमाओवादीकै कार्यर्ताले गोली हान्ने धम्की दिएका छन् । गोर्खा बारपाकका वाईसीएल धनबहादुर घलेले गोली हानेर हत्या गर्ने धम्कीसहितको
एसएमएस दुइटै नेतालाई शुक्रबार पठाएका हुन् । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। सहिदको सपना र जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेर देशद्रोही बनेको आरोप घलेले लगाएका छन् । धम्कीसहितको एसएमएस आएपछि दाहाल र भट्टराईले त्यो एसएमएस प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई जानकारी गराइएको थियो । प्रहरीले उनीविरुद्ध कुनै जाहेरी आए आज म्याद थप गरेर मुद्दा चलाउने बताएको छ । धम्की दिने घलेलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ । घलेले एसएमएस पठाएको स्वीकार गर्दै नेताहरूले बाचा गरेअनुसार काम नगरेकाले रिस उठेर पठाएको बयान दिएका छन् ।